Famatsiana avy amin’ny AFD: 24 miliara Ar, fanofanana mpiasa ho matihanina | NewsMada
Famatsiana avy amin’ny AFD: 24 miliara Ar, fanofanana mpiasa ho matihanina
Nambara, omaly, ny fisian’ny Tahiry malagasy famatsiam-bola ho fampiofanana ny mpiasa (FMFP)*. Ny any amin’ny sehatra tsy miankina no tena kendrena, fiaraha-miasan’ny fanjakana ary ny mpamatsy vola. « Zo ho an’ny mpiasa ny fanofanana azy ireo, ary adidin’ny fitondram-panjakana ny mitady lalana ho an’izany », hoy ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny FMFP, Andriamamonjiarison Noro, sady filohan’ny GEM*, Vondron’ny indostria eto Madagasikara.
Amin’izao fivoaran’ny tontolon’ny toekarena izao, hatao manaraka izany ny fahalalan’ny mpiasa mifehy ny sehatra misy azy. « Iray amin’ny andraikitra roa tsy voafehin’ny mpiasa manao azy amin’izao vanim-potoana izao », hoy ihany ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny FMFP. Midika izany fa mamono antoka ny orinasa, tsy afahana misedra fifaninanana ankehitriny, eto an-toerana na any ivelany.
Izay nahatonga ny Gem nangataka io tahiry io amin’ny fanjakana, ka voajoro ara-dalàna izao. Tokony handray anjara amin’izany tahiry izany ny orinasa, 1 % amin’ny fitambaran’ny karaman’ny mpiasa rehetra ao aminy. Ny tena mpamatsy vola be indrindra amin’izao fisokafany izao ny Agence Française de Développement (AFD), 6 tapitrisa euros na 24 miliara Ar, manampy izany ny Vondrona eoropeanina (UE) sy ny mpiara-miombon’antoka hafa.
Hisian’ny mpiasa matihanina
Araka ny fangatahan’ny orinasa tsirairay ny fanofanana, na fitambaran’ny orinasa amina sehatra mitovy na sehatra samihafa. Tanjona amin’izao fiofanana izao koa ny manampy ireo tanora vao nahavita fianarana, sy ireo zara fa miasa. Avy amin’izany fampiofanana izany ny hisian’ny mpiasa matihanina maharitra, mety hahafahana manangana orinasa madinika sy salantsalany, na ahitana tolotrasa tsara kalitao. Miainga avy amin’ny fifehezan’ny mpiasa ny andraikitra misy azy ny mampivoatra ny orinasa.
Vokatry ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izao tahiry izao, toy ny fisiany any amin’ny firenena maro hafa. Kendrena ny hanomezan-danja ny mpiasa hampisy fifaninanana eo amin’ny samy orinasa. Heverina ho 600 isam-bolana, raha vitsy indrindra, ny mpiasa homena fiofanana, ka vehivavy ny 40 %, ary tanora hatramin’ny 35 taona no maro an’isa. Tompon’antoka ny mpampiasa sy ny fanjakana.
FMFP* : Fonds Malgache de Formation Professionnelle.
Gem* : Groupement des entreprises de Madagascar.